Birmania - Myanmar | Page 36 | Atlante
နည်းပြဆိုးလ်ရှား ကြီးမားသည့်ဖိအားရှိသွားပြီဟု ရွိုင်ကိန်းနှင့် နဗီးလ် သုံးသပ်
DVB - Sun, 07/11/2021 - 02:30
မန်ချက်စတာဒါဘီမှာ မန်စီးတီးကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် နည်းပြဆိုးလ်ရှားမှာ ကြီးမားတဲ့ ဖိအားရှိသွားပြီလို့ ရွိုင်ကိန်းနဲ့ နဗီးလ် တို့က သုံးသပ်ပါတယ်။ ၏
နည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ လီဗာပူးကို ၅ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲအပြီးမှာကတည်းက ထုတ်ပယ်ခံရမယ်လို့ သတင်းထွက်ခဲ့ပေမယ့် စပါးနဲ့ အက်တလန်တာပွဲစဉ်တွေမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေရခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးနဲ့ပွဲကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာက လီဗာပူးနဲ့ ပွဲထက် ပိုဆိုးပြီး ဖိအားပိုရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ ရွိုင်ကိန်းက ပြောပါတယ်။
လုခ်ရှော၊ မက်ဂွိုင်ယားနဲ့ ဖရက်ဒ်တို့ရဲ့ခြေစွမ်းအပေါ်ရွိုင်ကိန်းက ဝေဖန်ခဲ့ပြီး သူတို့ကို အားကိုးပြီး ရလဒ်ကောင်းတစ်ခု မျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်လို့ ရွိုင်ကိန်းက ဝေဖန်ပါတယ်။
နည်းပြဆိုးလ်ရှား အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ရွိုင်ကိန်းက ပြောပါတယ်။
နဗီးလ်ကတော့ မနှစ်ကအထိ ယူနိုက်တက်အသင်းက တိုးတက်နေဆဲ အသင်းလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ပြီး ဒီလိုခြေစွမ်းကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားခဲ့ကြောင်း၊ နည်းပြဆိုးလ်ရှားအတွက် အလွန်ကြီးမားတဲ့ ဖိအားတွေရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း နဗီးလ်က သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
DVB - Sun, 07/11/2021 - 02:27
DVB - Sun, 07/11/2021 - 02:24
မကွေးတိုင်း၊ ရေစကြိုမြို့နယ်က ရပ်ကွက်ကျေးရွာတချို့က ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရေစကြိုအခြေစိုက် တပ်ရင်းတခုထဲမှာ တိမ်းရှောင်နေရင်း စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေကြတဲ့ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဟာ ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှာ စိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက် ရေစကြိုအခြေစိုက် အမှတ် ၂၅၈ တပ်ရင်းထဲကို တိမ်းရှောင်ခိုလှုံကြရင်း စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေကြတာလို့ သိရပါတယ်။
အမှတ် ၂၅၈ တပ်ရင်းနဲ့နီးစပ်သူတဦးက “အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရဲ့အမျိုးတွေက တပ်ထဲမှာရှိကြတယ်။ သူတို့ဘဝတွေက အပြင်မှာမလုံခြုံတော့ဘူးထင်ကြလို့ တပ်ထဲကို ပြောင်းလာကြတာ။ တဦးချင်းလည်းပါသလို မိသားစုလိုက်လည်းပါတယ်။ တပ်ထဲရောက်တော့ အလကားမထားဘူး။ စစ်သင်တန်းပေးတာပေါ့” လို့ ပြောပါတယ်။
ရေစကြိုမြို့နယ်မှာ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု ၈၉ ခုရှိပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၅၆ ဦးက ရာထူးကနေနုတ်ထွက်ထားကြကာ ကျန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက ဆွေမျိုးတွေရှိရာ အခြားမြို့နယ်တွေကို ရှောင်ပြေးနေကြသလို တချို့က တပ်တွေထဲကို ပြောင်းရွှေ့ပုန်းခိုနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“တစ်နေ့တစ်ခြား အသေများလာပြီး အင်အားချည့်နဲ့လာတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှာ အဲ့ကောင်တွေကို အသုံးချဖို့ စစ်သင်တန်းပေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ CDM ဝန်ထမ်းတွေ၊ NLD ပါတီဝင်တွေ၊ ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့သတင်းတွေ စစ်တပ်ကိုပေးပြီး အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် သတင်းပေးဒလန်လုပ်ခဲ့ပြီး အခြေအနေမကောင်းလို့ စစ်တပ်ထဲကို မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာပဲ” အမည်မဖော်လိုကြတဲ့ဒေသတစ်ဦး ပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ အမှတ် ၂၅၈ တပ်ရင်းထဲမှာ စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေကြသူတွေဟာ ဇီးတောကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုဝင်းမြင့်အောင်၊ မင်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုမျိုးဝင်းခိုင်၊ ဟင်္သာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုအောင်နိုင်မိုး နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးကနေနုတ်ထွက်စာတင်ထားသူတချို့အပါအဝင် အင်အား ၃၀ ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ တပ်တွင်းကလာတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေဆီက သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရေစကြိုမှာအခြေစိုက်တဲ့ အခြားတပ်ရင်းတွေထဲမှာလည်း အခုလိုသင်တန်းတက်ရောက်နေသူတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီကသိရပြီး အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ဒီဗွီဘီက ဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။
ရေစကြိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တာဝန်ခံတဦးက “ပြည်သူဘက်မှာမရပ်တည်ဘဲ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းရပ်တည်သွားကြတဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမဆို ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ချေမှုန်းသုတ်သင်ရမှာကတော့ ကျနော်တို့ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခြေလှမ်းတွေကို မျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီး ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဆီကို အမြန်ဆုံးသတင်းပေးပို့ကြဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ မကြာခဏဆိုသလို တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့် သေဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီး အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း ဒေသခံပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကို ဝင်ရောက်စီးနင်းကာ ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတာ၊ လူနေအိမ်တွေမီးရှို့တာ၊ အိမ်ထောင်ပစ္စည်းတွေကို ဖျက်ဆီးသွားတာတွေနဲ့ ဒေသခံတချို့ကိုလည်း ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘိုကလေး ရုပ်ဆိုင်ရွာကျောင်းအုပ်ကြီးက ကလေးများကျောင်းတက်ရန် မိဘများကို ဖိအားပေး
DVB - Sun, 07/11/2021 - 02:23
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ် ရုပ်ဆိုင်ကျေးရွာမှာ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက ကလေးတွေကျောင်းပြန်တက်ဖို့အတွက် မိဘတွေကို ဖိအားပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ကာ နိုင်ငံတဝှမ်းက ကျောင်းတွေကို ပြန်လညဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် ရုပ်ဆိုင်ကျေးရွာမှာ ကျောင်းတက်သူ အရေအတွက် ၁၄ ဦးသာ ရှိတာကြောင့် ခုလို မိဘတွေကို ဖိအားပေးပြီး ကလေးတွေကို ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ ပြောဆိုနေတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
“စဖွင့်တဲ့ရက်က ၁၄ ယောက်ပဲတက်တဲ့ အဲ့ဆရာမကြီးက ကျောင်းမတက်တဲ့ ကလေးတွေကို စာမေးပွဲပေး မဖြေဘူးဆိုပြီး မိဘတွေကိုပြောပြီး ဖိအားပေးတယ်၊ ပြီးတော့ CDM လုပ်တဲ့ဆရာ ဆရာမတွေကိုလည်း ဖိအားပေးပြန်ခေါ်ထားတယ်” လို့ ဒေသခံကျောင်းသား မိဘတဦးက ပြောပါတယ်။
ရုပ်ဆိုင်ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ကျောင်းသား ဦးရေးဟာ အစပိုင်းမှာ ၁၄ ဦးရှိခဲ့ပေမယ့် နိုဝင်ဘာ ပထမပတ်မှာတင် အယောက် ၆၀ လောက်ရှိလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘိုကလေးမြို့မှာ စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့အတူ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က စတင်ကာ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့် အများစုကတော့ ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကျောင်းသားမရှိဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေသာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Myanmars Suu Kyi Denies False Reports That She Opposes Armed Resistance to Junta.
Myanmar News Net - Sun, 07/11/2021 - 01:24
Myanmars Suu Kyi Denies False Reports That She Opposes Armed Resistance to Junta. The Irrawaddy News Magazine
Ex-US Ambassador to UN Bill Richardson Ends Myanmar Visit - U.S. News & World Report
Myanmar News Net - Sun, 07/11/2021 - 01:23
Ex-US Ambassador to UN Bill Richardson Ends Myanmar Visit - US News - US News U.S. News & World Report
Myanmars Aung San Suu Kyi goes on trial
Myanmar's Aung San Suu Kyi goes on trial Reuters
Myanmar News Net - Sun, 07/11/2021 - 01:22
Karenni resistance forces report multiple junta casualties as battles escalate - Myanmar NOW
Myanmar News Net - Sun, 07/11/2021 - 01:21
Karenni resistance forces report multiple junta casualties as battles escalate myanmar-now
Myanmar court denies bail for Detroit area native Fenster, adds new charge
Myanmar court denies bail for Detroit area native Fenster, adds new charge The Detroit News
Trial of Myanmar&#39;s Suu Kyi nears closing arguments Recorder
Trial of Myanmar's Suu Kyi nears closing arguments: source Business Recorder
UN investigators against humanity under Myanmar junta
Myanmar News Net - Sun, 07/11/2021 - 01:20
UN investigator: Crimes against humanity under Myanmar junta CTV News
Myanmar to release 5,000 prisoners held over coup BBC News
ASIA - Conflicts in Asia- Afghanistan and Myanmar the most serious cases - Agenzia Fides
ASIA - Conflicts in Asia: Afghanistan and Myanmar the most serious cases Agenzia Fides
Gag order keeps Aung San Suu Kyi&#39;s court testimony secret in Myanmar Nation USA
Gag order keeps Aung San Suu Kyis court testimony secret in Myanmar News Nation USA
UN investigators against humanity under Myanmar junta - Yourbasin
UN investigator: Crimes against humanity under Myanmar junta KMID - Local2News Myanmar: Systematic attack on civilians, rights mechanism reveals UN News UN investigator: Myanmar military's attacks on civilians constitute "crimes against humanity" Axios U.N. investigator 'hopeful' Facebook will hand over more Myanmar information Reuters Crimes against humanity under Myanmar junta: UN investigator Th
Political standoff in Myanmarachallenge for ASEAN - Op-eds Gulf News
Political standoff in Myanmarachallenge for ASEAN Gulf News
Myanmar News Net - Sat, 06/11/2021 - 22:21
Beijing [China], November7(ANI): While the world is opening up amidalull in the COVID-19 pandemic, China is looking more and more inward and President Xi Jinping is sitting at home. It has been over 650 days since Xi has been seen on the world stage outside his country. Since his visit to Myanmar on January 17, 2020, he has not met any leader in-person, attended any international event or visited any foreign country.
Myanmar News Net - Sat, 06/11/2021 - 17:18
Naypyitaw [Myanmar], November6(ANI): Myanmar's latest amendments in telecommunications law are an attempt by the junta to suppress the voice of journalists and muzzle the media, experts and rights activists said on Friday. Months after the Myanmar Military overthrew the democratically elected government in the country, junta chief Min Aung Hlaing on Monday amended the Television and Broadcasting Law to include lengthy p